Shiinaha Soosaarayaasha Qaybta Vinyl Vinyl Qaybiyeyaasha iyo alaableyda | Longjie
Nidaamka Raji Longjie wuxuu soo saaraa noocyo jaangooyooyin xaddidan iyo qaabab buuq leh laakiin waxaan ogaanay in shaqooyinka qaarkood u baahan yihiin wax gebi ahaanba caado ah Longjie waxaan kula shaqeyneynaa si aan u qaabeyno sida ugu habboon ee mashruucaaga. Waxaan awood u leenahay inaan u habeynno nidaamkeena gawaarida si aan ugu dhigno aragtidaada mashruuca.
1. Ma jiri doono foosha dambe hal mar oo rakib ah.
2. Tayo wanaagsan oo adag sida dhagaxa oo kale.
3. Waa xarrago waxayna qurxin kartaa guryaha dadka.
4. Si fudud loo ilaaliyo.
Qaar ka mid ah Muunado Gawaarida Longjie
Longjie Baluster ayaa buuxsamay
Si dhakhso leh oo fudud!
Si fudud loo rakibo aragti furan meel kasta oo aad ku taal sagxaddaada ama barxaddaada.
Xirmooyinka Kale ee Baluster Infill
Gaabis ah oo Qalafsan:
Inta badan alaab-qeybiyeyaasha baluster infill ma aysan ku qaadanin waqtiga sameynta nidaam dhammaystiran oo lagu dedejinayo rakibidda iyo yareynta tirada qaybaha ka dhasha mashruuc isku-dhafan oo waqtigiisa ku habboon.
Qalabka biraha tayada leh ee biraha tayada leh iyo balastarka ayaa ka dhigaya tan si toos ah dayactir bilaash ah.
Qoryaha, Birta ama Nidaamyada Bixinta Iskujira
Qoryaha, birta, ama biraha isku dhafan dhammaantood waxay u baahan yihiin heer kala duwan oo dayactir socda ah. Qoryaha waa in la rinjiyeeyaa ama la wasakheeyaa oo la ilaaliyaa sanadkiiba. Birta waa in dib loo rinjiyeeyaa 5tii sanaba mar si looga hortago miridhku iyo daxalka. Isku-darka wuxuu leeyahay warshad dhan oo nadiifiyeyaal ah, wasakheeyeyaal, iyo cusbooneysiiyayaal ah si looga caawiyo ilaalinta muuqaalka.
Bixiye Longjie BUUXI
Wareeg hawo weyn!
Tareenka Baluster wuxuu bixiyaa aragti sare iyo wareegga hawada oo aad u sareeya iyadoo loo maro tareenka. Waxay u oggolaaneysaa hawadu inay kaa caawiso inaad qabow ku jirto maalmahaas xagaaga kulul.
Muraayad Soo Buuxda
Wareeg hawo la'aan ah.
In kasta oo muraayadda muraayadda muraayaddu ay bixiso muuqaal muuqda haddana waxay si weyn hoos ugu dhigeysaa wareegga hawada… Longjie baluster Infill wuxuu isku daraa labada astaamood ee muhiimka ah ee ku jira shey tayo sare leh.
Magaca Pvc Classic Railing
Iska caabinta Dabaysha nidaamka xayndaabka 'pVC' wuxuu iska caabin doonaa heerka dabaysha 10. oogada
Faa'iidada Qalab fudud, Taariikhda Sannadaha, Ku habboon, Dhaqaalaha, Gaarsiinta Degdegga ah
Codsiga Qurxinta Guriga, Barxadda, Wadada, Beerta.
Adeegso nooca Longjie wuxuu badbaadin karaa ujuurada sameynta caaryada cusub
Geeddi-socodka Soo-saarka Wax-soosaarka PVC Classic
Hore: Qalabka Xayndaabka Gaarka ah ee Vinyl
Xiga: Jaranjarooyinka horay loo sii qorsheeyay ee jaranjarada